Sary roa hafa misy ny sisin'ny Samsung Galaxy S7 | Androidsis
Ireo loharanom-baovao tafaporitsaka toa ny @evleaks dia manana asa betsaka amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny pikantsary tampoka tampoka ao anaty boaty, tsy tena fantatra hoe iza no mpampita an'io vaovao io. Ny sasany manome ary sary tena izy Midika izany fa ny ampahany amin'ireo singa amin'ny smartphone vaovao izay afaka manintona mpampiasa an-tapitrisany na ilay iray vaovao manandrana manarina ny fatiantoka voaray tamin'ny taona lasa dia azo alaina tahaka izay nitranga tamin'ny mpanamboatra sasany izay fantatsika avy any Taiwan. Ireo karazana fivoahana ireo dia saika mampitombo ny fahalianana amin'ireo telefaona vaovao ireo izay andanian'ireo mpanamboatra vola dolara an-tapitrisany amin'ny varotra sy ny famokarana.
Iray amin'ireo nipoitra ora maro lasa izay, dia iray mifandray amin'ny marika vaovao Samsung Galaxy S7 izay haseho amin'ity alahady ity izay avy amin'ny tanan'ny CEO an'ny Samsung. Avy amin'ity terminal manokana ity eo amin'ny efijery misy ny sisiny faharoa, nanana ny vaovao izahay taloha kelin'izay izany no ho tena mahavariana indrindra, toy ny isan'ny pixel indroa izay ho hita amin'ity takelaka ity. Amin'ity sivana ity dia ananantsika sary roa tena misy amin'ny sisin'ny Samsung Galaxy S7 izay hanao ny laharana voalohany amin'ny andro. Sary roa mampiseho antsika amin'ny fomba hafa izay S7 sisiny izay nahafahanay nanangona tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, ny famaritana avo lenta izay mampiseho azy amin'ny lafiny rehetra.
1 Samsung Galaxy S7 sisiny, ny telefaona miolakolaka
2 Sary roa miaraka amin'ny dian-tongony
Samsung Galaxy S7 sisiny, ny telefaona miolakolaka
Miaraka amin'ireo sary roa vaovao ireo dia miverina ny fahatsapana mitovy rehefa manana an-tsaina ny sisin'ny Galaxy S7, ary ireto no izy ny sasany izay misy ifandraisany amin'ny fiolahana. Heveriko fa hevitra tsara dia tsara ny nanirian'i Samsung hanasongadinana ny hevitry ny fiolahana amin'ny sahaniny vaovao, satria io no iray tamin'ny tsy nampoizina azy tamin'ny taon-dasa rehefa namoaka ny sisin'ny Samsung Galaxy S6, izay nahitana farany mihodina be . manokana ary izany dia nifanaraka tamin'ny smartphone manokana. Izay nanana izany teny an-tànany dia mahalala izay tiako holazaina.
Raha izao izahay dia manampy zoro boribory izay manolotra endri-javatra bebe kokoa akaikin'ny miolaka, Miatrika smartphone Samsung izahay izay mahavita ode iray ho an'ny fiolahana. Ny fironana iray nomarihin'i Apple iPhones ary izay angonin'i Samsung hitondra ny findainy tena miavaka, toa ireo izay hasehony ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona.
Azontsika atao ny milaza fa ny miolakolaka dia amin'ny lamaody ary azo antoka fa tsy mijanona amin'ireo marika roa ireo isika ka mandritra ny taona dia miseho ny iray hafa terminal izay maka tahaka an'ireo zoro ireo voahodidin'ny Galaxy S7 sy iPhone 6.
Sary roa miaraka amin'ny dian-tongony
Raha te hanazava ianao fa manana an'ity telefaona ity sensor sensorInona no fomba tsara kokoa noho ny famoahana soritra vitsivitsy izay asehon'ny marika misy azy ireo hoe miharihary ny fampidirana an'ity singa ity, izay nanjary nilaina tamin'ny mpampiasa maro izay nahita fa tena ahazoana aina ny mamaha ny telefaona amin'ity fomba ity.
Ireo sary roa dia tena izy ary ankoatr'ireo marika ny dian-tànana izay hitanay akory ny taratry ny olona mandray azy ireo. Izy ireo dia manondro tsara ny fihodinan'ny smartphone ary ny fomba an-tranony somary lehibe kokoa noho ilay teo aloha. Amin'izany fomba izany dia heverina ihany koa fa ny telefaona dia ho afaka mamantatra ny dian-tànana haingana kokoa sy marina kokoa.
Tombony iray hafa amin'ny famandrihana ity telefaona ity, farafaharatsiny eto Eropa, ny fanampiny Makà fitaovana VR Virtual Reality maimaim-poana, noho izany ireo izay maniry mankafy karazana fanandramana fialam-boly hafa, azo antoka fa tsy dia ratsy loatra ny mividy azy io alohan'ny an-tsena ity sainan'i Samsung vaovao ity.
Dingana iray hafa natao talohan'ny fahatongavan'i Galaxy S7 sy ilay vaovao izay mbola homena vitsivitsy afaka andro vitsivitsy izay navelanay hahafantatra avy any Barcelona izay hitranga amin'ny Mobile World Congress avy amin'ny tanan'i Samsung.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Sarina sary vaovao roa an'ny sisin'ny Samsung Galaxy S7 no sivana